Indlela Buyisa esusiwe imiyalezo kusuka ku-iPhone
Imiyalezo musa empeleni niba ukusulwa
Ngakho, uma wena zisusiwe imiyalezo yakho yombhalo ngephutha. Lost kubo ngenxa jailbreak, noma nokuthuthukela iOS yakamuva. Kusadingeka ithuba ukuthola kwabo. Lapha ngikubonise 5 izindlela ukubuyisa imiyalezo yombhalo wena isuswe kusuka ku-iPhone.
5 izindlela ukubuyisa kusulwe imiyalezo kusukela iPhone
Lapha sethula 5 izindlela alulame elahlekile imiyalezo evela iPhone. Sicela ukhethe eyodwa okuyinto efanelekayo isimo sakho samanje. Kungase kudingeke iTunes futhi iCloud isipele phakathi kwenqubo yokutakula.
Buyisa kusulwe imiyalezo ngokuqondile iPhone
Khiphela imiyalezo esuka iCloud ibhekhaphu ngokusebenzisa iPhone Isipele extractor
Khiphela SMS kusuka ku-iTunes isipele software iPhone Data Recovery
Buyisa kusulwe imiyalezo ngokuqondile iCloud (Free)
Buyisela imilayezo elahlekile kusuka ku-iTunes isipele (Free)
Method 1: Buyisa kusulwe imiyalezo ngokuqondile iPhone
Le ndlela isebenza uma abantu balahlekelwa umbhalo wabo imiyalezo ngenkathi abanalo isipele. Kuyinto efanelekayo zonke isizukulwane iPhone, kuhlanganise iPhone 6 Futhi 6 plus.
Sizokwenza badinga 3rd party iPhone Data Recovery ithuluzi ukusisiza, ezingasetshenziswa ngqo scan ifoni futhi ukuthola okuqukethwe kususiwe, wayesezibeka emuva ku-iPhone yakho noma ugcine kukhompyutha.
Okokuqala, ukulanda isofthiwe iPhone Data Recovery futhi uyifake. Kube has kokubili Windows ne-Mac version. Bese landela izinyathelo.
Step 1: Xhuma iPhone yakho kukhompyutha futhi ukusebenzisa i-iPhone ithuluzi alulame idatha.
Xhuma iPhone yakho kukhompyutha futhi musa ukudonsa phansi ngesikhathi alulame inqubo. Khona-ke uvule uhlelo, uzobona esibonakalayo main njengoba ngezansi.
Step 2: Qala inqubo scan ukuze uthole imilayezo elahlekile
Ngemuva kokuchofoza “Qala Scan” Inkinobho, uhlelo uzoqala ukuskena efonini yakho bese uzama ukuthola yonke idatha kudivayisi yakho, kuhlanganise nalezo isusiwe.
Step 3: Buka kuqala bese kutholakale kusulwe imiyalezo kusukela iPhone
Ngemuva ukuskena, yonke idatha etholakele ayaboniswa izigaba, ungakwazi kuqala imilayezo. Khona-ke abakhululiwe isusiwe ku-olintshi. Thikha labo udinga bese uchofoza “Alulame” Inkinobho. Uhlelo ngeke akucele uma ufuna ukuzilondoloza kudivayisi yakho noma kwikhompyutha.
Method 2: Khiphela imiyalezo esuka iCloud ibhekhaphu ngokusebenzisa iPhone Isipele extractor
Le ndlela kufanelekile labo isipele iPhone yabo nge-iCloud. Ungakwazi kukhishwe ifayela iCloud isipele futhi uthole imilayezo. Ngisho ungenayo iPhone yakho emhlabeni, usengakwazi ukuthumela imiyalezo yombhalo ngaphandle kukhompyutha.
Yiqiniso, kufanele ulande iPhone software Isipele extractor Okokuqala.
Step 1: Khetha imodi alulame futhi ukuxhuma akhawunti yakho iCloud
Uhlelo bese ukhetha Imodi nokuvulwa “Buyisa ku ICLOUD Backup Amafayela”, bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho iCloud. Uhlelo wangayigcina amarekhodi kwi-akhawunti yakho, iphasiwedi noma okuqukethwe nganoma isiphi isikhathi phakathi nokuqulwa zakho.
Step 2: Download iCloud zakho zokulondoloza kanye nokuhlaziywa
Ngemuva kokuthi ungene ngemvume ku-iCloud, uhlelo izokubonisa zonke iCloud izipele. Khetha eyodwa yakamuva bese uchofoza “Thwebula”, bese ubeka uphawu uhlobo amafayela ungathanda ukulanda, Chofoza “Next” ukuqhubeka. Uma uchofoza “Qala Scan” Inkinobho, uhlelo izolanda ifayela yokusekelayo kanye nokuhlaziywa ke.
Step 3: Buka kuqala bese alulame imiyalezo ufuna kusukela isipele ICLOUD
Ilinde scan kuqedile. Ungahlola kuqala yonke imilayezo iCloud zakho zokulondoloza. Hlola nabo uphawu labo udinga. Bese uchofoze “Alulame” inkinobho ukuzilondoloza kukhompyutha yakho. Isofthiwe kuzosenza ukuthi ufuna ukubuyisela lezo imiyalezo iPhone yakho uma ixhunywe nge computer yakho phakathi kwenqubo yokutakula.
Method 3: Khiphela SMS kusuka ku-iTunes isipele software iPhone Data Recovery
Le ndlela kakhulu efana Indlela 2; umehluko phakathi kwabo ukuthi le ndlela kuyinto zisebenzisa iTunes isipele. Siyazi, iTunes kuzodala isipele sonke isikhathi uma synched iPhone yakho nge computer yakho. Ngakho lokhu kusinika kungenzeka ukuba alulame idatha.
Kufanele ukulanda isofthiwe lokuqala njengawo ngaphambi.
Step 1: Khetha iTunes mode alulame
Qalisa isofthiwe bese ukhetha mode alulame "Phinda kusuka iTunes Backup ifayela". Kuyoba ukuthola uhlu zonke izipele iTunes kukhompyutha yakho. Khetha eyodwa yakamuva futhi hit “Qala Scan”.
Ngemva kwesikhashana, yonke idatha ku ifayela iTunes isipele ngabe ukukhishwa futhi uboniswa ezigabeni. It iqukethe kusulwe futhi imilayezo ekhona kudivayisi yakho. Ukuhlukaniswa kubo, sicela uvule “ukubonisa izinto ezisusiwe kuphela”. Khetha labo umbhalo ofuna bese uchofoza “Alulame” Inkinobho. Imilayezo kungenziwa ngqo livuke iPhone yakho uma uqhubeka iPhone yakho exhunywe nge computer yakho phakathi kwenqubo yokutakula.
Method 4: Buyisa kusulwe imiyalezo ngokuqondile iCloud (Free)
Uma uke wasekela iPhone yakho ku-ICLOUD, ongakwenza ukubuyisela iPhone yakho yombhalo kusukela isipele (ICLOUD isipele angase abe isipele best unayo ngoba kungaba avumelana idivayisi yakho ngokuzenzakalelayo phezu Wi-Fi nsuku zonke lapho ivulwa, sivaliwe, futhi ixhunywe umthombo amandla. Thola imininingwane ngalokho ICLOUD uyahlehla).
Le ndlela isebenza kubo bonke iPhone isizukulwane ukugijima iOS 5 noma kamuva. Kodwa kufanele wazi ukuthi, lokhu kuzosusa okuqukethwe wamanje kanye izilungiselelo iPhone yakho kuqala bese ukopisha idatha ubudala. Kusho uma unazo imilayezo emisha ngemva ngephutha elahlekile SMS, ungabese walahlekelwa imibhalo emisha.
1. Efonini yakho, Yiya Izilungiselelo > General > Isofthiwe yokubuyek. Uma inguqulo entsha ye-iOS iyatholakala, ulandela iziqondiso ezikuskrini ukulanda futhi uyifake.
Method 5: Buyisela imilayezo elahlekile kusuka ku-iTunes isipele (Free)
Le ndlela isebenza zonke kudivayisi ye-iOS. Uma ungazange ukuvimbela othomathikhi ukuvumelanisa kukho kuma-iTunes, ke zizokwenza isipele ifoni yakho njalo uma synched iPhone yakho ne-iTunes. Ungakwazi kalula ukubuyisa imiyalezo nalabo izipele.
Kodwa kusimo yayo kuyafana Indlela 4, Ngaso sonke isikhathi kufanele ugcine isipele yakho ye-iTunes usesikhathini. Noma ungase ulahlekelwe idatha yakho yamanje kanye nezilungiselelo kusukela iPhone ngabe ayosuswa ngokugcwele futhi ubuyele emuva isimo odlule.
Futhi akukho izindlela kuqala okuqukethwe kule isipele, futhi awukwazi kuphela alulame ingxenye kubo. Ngakho mina asikisela ukusebenzisa iPhone Data Recovery.
Ezihlobene: Indlela ukuze alulame izithombe elahlekile kusuka iPhone.
Posted on September 21, 2015 Januwari 27, 2016 Umbhali Izigaba iOS Data RecoveryAmathegi iPhone, iPhone SMS Recovery, buyisa kusulwe imiyalezo iPhone, buyisa imiyalezo on iPhone
ukuhumusha nge-Google :)))
^ _ ^ , Ngibhale english, bese usebenzisa i-plugin ukuhumusha kwezinye izilimi eziningi.
Pingback: ukubona ukususwa SMS iphone | Dailystore()
Langaphambilini post Previous: Nendlela Phinda kusulwe Amafoto kusuka iPhone
Next post Next: Indlela impande Google Nexus 5 e One Click